မွန်တို့ရဲ့ ရိုးရာသင်္ဘော ဆွမ်းကပ်လှူပွဲဓလေ့
Feature August 22, 2019
မီရာလာဂူဒါ (အိန္ဒိယ) ငယ်ရွယ်သော ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ ရူးရူးမူးမူး ချစ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ နက်ပြာရောင် အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားသော ပရာနေး ပီရူမလ္လာသည် မင်္ဂလာခန်းမအတွင်းသို့ လျှောက်လှမ်းလာသည်။ သတို့သမီးဖြစ်သူ အမ်ရူသာ ဗာရှီနီ၏လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားသော ပရာနေး၏အပြုံးမျက်နှာသည် ပျော်ရွှင်မှုနှင့် တောက်ပနေသည်။ မင်္ဂလာပန်းကုံးစွပ်ချိန်တွင် ဆွေမျိုးများက ကြဲပက်လိုက်သော အဝါရောင်ဆန်များက မင်္ဂလာမောင်နှံနှစ်ဦး၏...
Feature August 20, 2019
ရွှံ့မြေများ၊ နေအိမ် အပျက်အစီး ပုံများ ဘက်ဟိုးကြီးနှင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေသော လူအုပ်ကြီး၏ နဘေးဆရာဝန်များက ဆေးကုသပေးနေသည်။ ထိုသို့ ဆေးကုသမှုခံယူနေသူများထဲတွင် ဦးကရင် တစ်ယောက်လည်းပါသည်။ သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့ မနက်တွင်ဦးကရင် မနက်ဝမ်းစာ ဖြည့်တင်းပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ အပြန် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုများ လျှပ်စီးကြောင်းများနှင့်အတူ ပေါ်လာသော မိုးခြိမ်းသံများကြား...
Feature August 7, 2019
သြဂုတ်လ မိုးသက်လေးပြင်းများကြား မွန်ပြည်နယ် တစ်ဝန်းနှင့်မော်လမြိုင် မြို့တွင် ရေကြီးရေလျှံခြင်းသတင်းများက သဲ့သဲ့ကြားနေရလေပြီ ။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းခြင်း၊ရေကြီးခြင်းတို့နှင့် အတူ အခြေခံစားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ လှုပ်ခတ်ခြင်း က စတင်ခဲ့ လေပြီ။ အိမ်ရှင်များ ၏ညည်းတွားသံကလည်းပိုမိုကျယ်လောင်လာသည်။ “စျေးဝယ်ပြီး ပြန်လာတာနဲ့ စိတ်ညစ်ရပြီး။ ယူသွားရတဲ့ ပိုက်ဆံကနည်းနည်း ကိုယ့်ဝယ်ရမယ့် ပစ္စည်းတွေအတွက်က...
Feature August 6, 2019
ဆွန်ဘက်ဆွန်ဖုန်းဟာ လာအိုနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခေတ်တစ်ယောက်ဆိုသလို သြဇာကြီးတဲ့ပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါ လူသိများတဲ့ တာရှည်ခံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်သက်လုံးဆော်သြလှုပ်ရှားလာတဲ့ပြည်သူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ လာအိုမှာ စီးပွားရေးသမားတွေအတွက် ငွေရှာစရာအကွက်အကွင်းဟာ မြေထုနဲ့ရေထုဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါ မြေကိုဖွင့်ပြီး သယံဇာတရှာဖွေဖို့၊ စီးနေတဲ့ မြစ်တွေကိုတန့်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအလွန်အကျွံ ထုတ်ယူပြီး ငွေရှာဖို့၊ လယ်သမားတွေဆီက၊ တောင်ပေါ်နေသူတွေရဲ့ စိုက်ခင်းတွေဆီက မြေတွေသိမ်းယူနေတဲ့အချိန်မှာ Sustainable Developmentအကြောင်းဟိုဟိုဒီဒီ တရားလိုက်ဟောတဲ့...
ထုံစံအတိုင်း နံနက်အဆာပြေစားရင်း ကြည့်နေကျ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုကြည့်မိတယ်။ မိုးကဖွဲဖွဲနဲ့ ၀ါးတားတား မြင်ကွင်းပဲ၊ ကိုယ့်အိမ် မီးဖိုကလည်း အနောက်အိမ် နောက်ဖေးနဲ့ ကပ်လျက်ဆိုတော့၊ သူအိမ်သာဆင်းတာ၊ အော်တာ၊ ချက်ပြုတ်တာ အားလုံးမြင်သိ ကြား နေရ။ အဲပြတင်းပေါက်ကကြည့်ရင်း၊ အဆာပြေစာရင်း၊ ဖုံးပွတ်ရင်း မဲစာရင်းကို စိတ်ကရောက်သွားပြန်။ ဒီနှစ်က မဲစာရင်းပြုစုဖို့ရှိပါတယ်။...
အရှေ့ပင်လယ်ဆီက ငရဲခန်းတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးနေသည့် ဝံပုလွေဆိုးများ
Feature August 5, 2019
ယခင်က အနောက်ပင်လယ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသော ဧရာဝတီတိုင်းကျားဖောင်လုပ်ငန်းများသည် ကမ်းခြေနှင့်နီး၍ အမြတ်အစွန်း ပိုမိုရရှိသည့် အရှေ့ပင်လယ် မွန်ပြည်နယ်ရေပိုင်နက်ဆီသို့ မသိမသာ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာခဲ့သည်မှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုပင် မကတော့ပြီ။ ကျားဖောင်လုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည်လည်း မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့အနောက်ဘက် ၅ မိုင်ခန့်အကွာ အဘော်ကျေးရွာ အုပ်စု ပတ္တမြားတန်းရပ် တစ်နည်းအားဖြင့်ဒေသအခေါ် “အဘော်ကျားတန်း”တွင်...
Feature July 24, 2019
မူကြိုကျောင်းအုပ် ဆရာမ ဒေါ်အေးအေးမွန်တစ်ယောက် ကလေးငယ်များအတွက် ရေးဆွဲထားသော ပန်းချီကားချပ်များနှင့် ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို ပလတ်စတစ်လောင်းရန် မုဒုံမြို့သို့ နေအိမ်မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဒေါ်အေးအေးမွန်သည် မုဒုံမြို့သို့ မသွားရောက်မီ အချိန်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော သူမ၏ ခင်ပွန်းထံ ဆက်သွယ်ခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အေးအေးမွန်၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုဒေါ်လာက ပြောသည်။ “သူ စျေးမသွားခင်...
ခြေဥအစီရင်ခံစာပါ တပ်မတော်နှင့်ဆိုင်သောပုဒ်မများအပေါ် အကြံပြုချက်များ
Feature July 23, 2019
ဖြိုးသီဟချို ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့က တင်သွင်းလိုက်သည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပူးပေါင်းကော်မတီ အစီရင်ခံစာတွင် အဆိုပြုချက်ပေါင်း ၃၇၆၅ ချက် ပါရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည့်ကော်မတီတွင် ကော်မတီဝင် ၄၅ ဦး ပါရှိပြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD)က ၁၁၁၂ ချက်၊...
ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်နေသော အမွေအနှစ်များ
Feature July 22, 2019
မော်လမြိုင်မြို့ တောင်ရိုးတန်း တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် အနီရောင်တာဝါတိုင်နှစ်ခုကို အထင်းသားတွေ့မြင်နိုင် သည်။ ထိုအနီးအနားတွင်ကား အုတ်နှင့် သစ်သားတို့ကို အချိုးကျ ဆောက်လုပ်ထားသော ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦတစ်ခုကိုလည်း တွေ့နိုင်သည်။ ထိုအဆောက်အဦသည်ကား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လုံးဝ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်း အုတ်နှင့် ပျဉ်ချပ်များ နေရာတွင် မှန်လုံခန်းများနှင့် အုတ်အပြည့်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော...
ပိတ်လှောင်ခံ ခရီးစဉ်က လွတ်မြောက်ခဲ့သူများ
မော်လမြိုင်မြို့၊ စက်မှုဇုန်အနီး ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ရှိနေအိမ်တစ်အိမ်တွင် လူငယ် ၂၄ ဦးကို ပိတ်လှောင်ထားဟုဆိုသော သတင်းကြောင့် မော်လမြိုင် အခြေစိုက် မေတ္တာ ဆုံဆည်းအမည်ရှိ ပရဟိတအသင်း အဖွဲ့ဝင်များက ထိုနေအိမ်ရှေ့တွင် စောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်။ မော်လမြိုင်မြို့၊ ညောင်ပင်ဆိပ်ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်ရပ် မော်လမြိုင်- ဘားအံ ကားလမ်းမကြီးဘေးရှိ ဒေါ်သီတာအေး၏ နေအိမ်၌...